Ukufumana ukufikelela kweengcambu kwi-Motorola Cliq | I-Androidsis
antocara | | Ingcambu Android, Motorola, Tutorials
El Iselfowuni, eSpain nangaphandle kweUnited States esazi njenge I-Motorola Dext ibekiwe okanye kungenjalo, sele ungafikelela kwiingcambu kuyo. Njengoko sisazi, nini unokufikelela kwengcambu kwinkqubo Singaqhuba uthotho lwezicelo ezifuna le mvume ukuba zisebenze, kwaye sinokutshintsha i-rom kwezinye "eziphekiweyo".
Yonke inkqubo yokwenza ukubola kwisiphelo sendlela ichaza umngcipheko othile wokushiywa ngumnxeba ongenamsebenzi, ngenxa yoko asiloxanduva lwethu. Oku akuthethi ukuba ukuba izinto zenziwe ngokuchanekileyo akukho nto izakwenzeka.
1.- Ukhuphele abaqhubi kuxhomekeke kuguqulelo lweWindows
Nge-32-bit version yeWindows
Nge-64-bit version yeWindows
2.- ukhuphele kwaye ufake iGoogle RSD-Lite 4.5.7.
3.- Khuphela ifayile ye-SHX enye kwaye unzip.
4.- Emva kokufaka abaqhubi kunye nesicelo seRSD Lite, sebenzisa usetyenziso ngefowuni eqhagamshelwe kwikhompyuter kwaye ukhethe ifayile yokugqibela ye-SHK esiyikhuphileyo. Khetha i-terminal kwaye ucofe ekuqaleni. I-terminal iya kuqalisa kwakhona kwimowudi yokubuyisela kwakhona kwaye isebenzise i-flash, emva koko iya kuphinda iqalise kwakhona.
5.- Ukusuka kwi-Android SDK kunye nokusebenzisa i-adb sichwetheza oku kulandelayo:
I-adb iqokobhe chmod 4755 / inkqubo / bin / su
Ngoku sikhuphela le fayile kwaye senze ifayile yebhati.
Asazi ukuba le ndlela iyahambelana ne-Motorola Dext.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Motorola » Ukufumana ukufikelela kweengcambu kwi-Motorola Cliq
Izimvo ezi-71, shiya ezakho
Kwaye yintoni leyo!
Ukuze ukwazi ukufaka izicelo ezifuna oku kwaye ukwazi ukutshintsha i-rom
Ngaba ukhona umntu ozamile oku kwi-Motorola Dext (MB200) evela eMovistar eSpain? ¿?
Ndingazama ukuzama kwam kuqala, kodwa ndixhomekeke kakhulu kwiselfowuni kwaye iya kuba sisihlandlo sokuqala ukuba ndizame into efanayo kwiselfowuni. Ndakhe ndazama ngaphambili ngokududuza njalo njalo, kodwa hayi ngokuhambahamba
Ndikwindlela efanayo ne-whiky, ukuba umntu othile uzama ukuzama i-dext kwaye iyabasebenzela, bayeke bathethe njalo banike i-motoblur xD
Weno, ekugqibeleni ndenze isigqibo kwaye ndicinga ukuba sele ndiyiphumezile kwi-Motorola Dext (Movistar)
Nangona ndicebisa ukuba ujonge isifundo kwi Android adb kunye sdk.
Ndijonge (ukuba ingabekwa, kodwa isuse ngaphandle kwengxaki) le khonkco, nangona ikwiNgesi, ndicinga ukuba icacisiwe kakuhle:
Ngethamsanqa uFanti, nakwabanye ukuba bazame i-tb.
Masibone ukuba ndiyazama kule veki! Enkosi ngekhonkco WhikY
WhikY, yeyiphi i-SHX oyenzileyo nayo? tmo-morrison-viper-1.1.31-P3-rootedbythedude.zip okanye "iBoot + Amon_RA Ukubuyisela i-SHX" (kwikhonkco olithumelayo)?
Molo, ndivela phi eMexico kwaye ndinayo ne-motorola dext kwaye ndingayenza nengcambu?
Ndicinga njalo, yile fowuni inye
Ewe ndinengxaki xa ndidibanisa i-USB kwikhompyuter yam iyasilela kwaye ndazi njani ukuba yonke into yenziwe kakuhle kuba ngokutsho kwam yonke into injengangaphambili, kuphela ukuba ezinye izinto andisenazo, oko kukuthi, into ebeka inkampani kuyo azisekho njengoko ndinokuqinisekisa ukuba ndenze yonke into ngokufanelekileyo
Ukungathandabuzeki kuye nabani na ozimisele i-Cliq / Dext:
Emva kokuhluthwa (i-Dext ngale ndlela):
-Motoblur isasebenza, akunjalo?
-Ngaba kuya kufuneka uyile kwakhona into ethile kwifowuni ukuze idibane kakuhle neMovistar (kunye ne-3G), APN, ...?
Ukuba i-motoblur isebenza ngokufanayo, kuphela ukuba ndiyaqaphela utshintsho oluthile, umzekelo, ngaphambi kokuba ndibenokhetho lokufumana idatha ukuba ndiyenze nge-wifi okanye i-3g kwaye enye ingxaki endinayo kukuba imemori ye-sd ayixhunyiwe kwikhompyuter ngokusebenzisa i-usb andazi ukuba ndenze into engalunganga kwaye ngaphandle kwesoftware abayifakayo iyiselfowuni kuya kubakho indlela yokubuyisela isoftware kumzi-mveliso.
hehej besele ndibonile ukuba andiyenzanga kakuhle naphantsi kwe-sdk adb
Umbuzo omnye, ukhetho olukutshoyo «ukhetho d indlela yokufumana idatha ukuba ndiyenze nge-wifi okanye nge-3g«, uyakhumbula ukuba ibiphi? Akuvakali ngathi ndiyibonile (khange ndibenesibindi sokuyisusa kwangoku), kodwa inomdla kum.
Enkosi kwangaphambili, ngokubuyisela ndiya kukuxelela indlela yokukhuphela i-Android SQK: http://developer.android.com/sdk/ , uyikhuphele, uqalise ukuseta, kwaye ukhuphele izinto (andazi ukuba zonke ziyafuneka kodwa ndicinga ukuba ubuncinci becandelo le-USB, ukuze i-adb ikwazi ukubona iDexxt yakho)
Jonga olo khetho kulungelelwaniso, kulungile, kwimeko yam, yayinje, kuba bendine-amiricalatin firmware okanye into enjalo, kwaye ukuba ndiyiphosile leyo ye-sdk kunye ne-adb yokubeka imiyalelo, ndiyayibuyisela kwaye ayindithumeli esi sikrini silandelayo, ngekhe ndibuze qhiwuzulu ukuba andixelele into engalunganga
Ndikwesa sinye andinakukwazi ukufaka i-sdk ukuba umntu angandinceda okanye enze into osele uyenzile, jonga ukuba ungandinceda ndiyishiya iposi yam ukuba bafuna ukunxibelelana nam kwi-msn riki_mm@hotmail.com
hehehe bazakutsho indlela ekucaphukisa ngayo apha hehehej kodwa kwiwebhu ndicebisa ukubeka isikhokelo se-sdk okanye i-adb ukuze abatsha njengam osea noob haha ​​bayayazi indlela yokwenza oku kwaye baqonde ngcono ukuba yintoni le malunga nengcambu apho andobiendo ukuba ungayenza njani nge-sdk, ukubingelela kubo bonke
Umntu othile uyazi ukuba angayibhala phi le nto:
Ndicinga ukuba kwinkqubo ye-Eclipse kodwa kweliphi icala esele ndikhuphele yonke into, faka iinguqulelo 1.5 ukuya ku-2.0 ndifuna uncedo
Ngoku ukuba yonke into isonjululwe ndiyenzile ngokusemandleni am kwaye ukuba ndiyayicebisa, akukho nto isilelayo ukuba ulandela amanyathelo owafunayo ukubona i-sdk ene-adb ngaphambi kokwenza yonke le nkqubo ke ndinqwenela wonke umntu ngethamsanqa into afuna ukuyenza ukuba bafuna ukunceda okanye ukucacisa indlela yokwenza amanyathelo kukho i-imeyile yam enentlahla
kwaye ndilibale ukubona ukuba umntu othile angandicacisela na ukuba zinantoni na ingcambu kunye nokuba kungenziwa malini
Nabani na owenze ngeMovistar Dext?
Nje ukuba yonke inkqubo yenziwe, ngaba isasebenza neMovistar (iLizwi + ledatha ye3G)? Okanye uyayigcina i-T-Movile ROM kunye neselfowuni esebenza kuwe kuphela e-USA?
@rikimm: Isifundo se-SDK / ADB: http://bit.ly/8gBeAv
ngendlela, kuya kufuneka uphumeze i-adb command kwi-cmd.exe window
Intengiso uhlala ne-rom yento yokudlala inyama yehagu ubona ukuba ifon yam ayinayo imisebenzi ye-3g kodwa nokuba iyahamba, ukuba iyandisebenzela, ndifumana imiyalezo yokufowuna njlnjl. Umsebenzi yi-3g rom yokuba ube ne-3g
Ndiyathandabuza ukuba yintoni umahluko phakathi kwe-rom ukusuka kwi-tmovile ukuya kwiorenji eFrance, uthini umahluko, ingaba i-orenji ine-3g yehagu, i-United States ayinayo i-3g, kwinto endiyibonayo kwisisele sam
@rikimm: iOrange FR iya kuba nekhibhodi yeAZERTY. Ubuncinci ndiyayibona njengomahluko.
Hmm, ayilunganga bendicinga ukuba iza ne-3g kuba iseli yam ayisenayo xa ndiyisusile kwaye umntu uya kuyazi incwadana ngesiSpanish ngendlela ezisebenza ngayo iingcambu nendlela yokubeka iirom okanye izicelo
Ukuba andiphazami, i-3G iza ngokungagqibekanga. Ngapha koko ayisiyonto onokuyenza / ungayikhubazi.
Nangona kunjalo, mhlawumbi into oyiphosayo (kuba ayizukuza kwi-ROM oyikhanyisileyo) luqwalaselo lwe-APN (igama lendawo yokufikelela) yomsebenzisi wakho.
Khangela kwi http://modmyi.com/wiki/index.php/Carrier_APN_Settings ukuba ufumana eyakho kwaye ukuba kufanelekile. Ukuba akukhange kubenjalo, ndicinga ukuba ngokubiza umntu osebenza naye kufuneka bakunike (baxelele ukuba uneselfowuni entsha yasimahla kwaye ufuna ukuyilungisa).
Kukho usetyenziso lwe-Android ekuthiwa yi-APNdroid ekuvumela ukuba ugcine ii-APN zakho kwi-xml kwi-SD. Emva koko unokuyibuyisela.
Ukuba akunjalo, ngesandla yiya Useto / Unxibelelwano. IiNethiwekhi ezingenazingcingo / eziSelfowuni / i-APN: Imenyu, i-APN eNtsha kwaye ufake ulwazi apho.
Ndiyathemba ukuba iyakusebenzela kwaye iyakusebenzela (nangayiphi na imeko, yitsho apha)
IGrax intengiso ondincedileyo kuye kwafuneka ndiqwalasele i-apn ukwenza i-3g isebenze kwaye ukuba ndiyifumene iyinkampani. Grax kwakhona kwaye ndiyathemba ukuba sele unayo i-roxt imibuliso yakho
Ndiyavuya iyakusebenzela. Ngaphandle kokufuna ukwazi, ekugqibeleni uyibekile i-TMobile ROM? Andikayimisisi eyam okwangoku, iyandoyikisa kancinci ukuba ayizukusebenza kamva ...
Ukuba ndibeka i-tmobile enye kwaye yonke into ihamba kakuhle, khange ndibenangxaki, kuphela kukuba ezinye ii -apps azindisebenzeli njengophawu lokuvumela ukuba ndingakwazi ukuyenza isebenze hehehe kodwa yonke into ihamba kakuhle ayikhathazi ndiyathemba ukuba ngoku ukuba ungazama
Ngokucacileyo ukuba ulandela amanyathelo kakuhle kwaye ungene kwi-sdk kunye ne-adb kuqala ngaphambi kokwenza ingcambu ngethamsanqa
Ngolwazi, iphepha lam malunga ne-Dext: http://bit.ly/7DXep3
@rikimm Molo, DEXT yam ivela eMexico, isuka kumsebenzisi weTelcel. Ndisuse nje iingcambu ndafaka i-T-Mobile yase-US iROM kwaye yonke into isebenza kakuhle.
Ndifuna ukukubuza ukuba ngaba uyakwazi ukufikelela kukhetho oluvela kuseto> Ukuhanjiswa kweDatha, apho unokukhetha lonke unxibelelwano- ukhetho lwe-WiFi kuphela, kuba andinayo iphakheji yedatha enesivumelwano kwaye kubonakala ukuba ifowuni yam Ukuqhagamshela kwi-3G xa ungafumani nethiwekhi ye-WiFi kwaye awufuni kuhlawuliswa kamva. Ndiya kuluxabisa ngokwenene uncedo lwakho!
Phendula kwi gelor
i-pus ukuze ingangeni kwinto ye-3g, into onokuyenza kukususa i-telcel web njengoko intengiso isitsho: ngesandla yiya kuseto / Unxibelelwano. Iinethiwekhi ezingenazingcingo / zenethiwekhi / i-APN: Imenyu, i-APN eNtsha kwaye ufaka ulwazi apho.
Ulwazi oluku-apn uyalicima ukuze lingaxhumi kwi-3g xa kunokwenzeka ukhumbule nge-telcel rom awuboni ukuba bekukho ukhetho lokuba kufuneka ikhuphele idatha kwaye uyibeke ukuba soloko i-wifi ngeselula ingasenzi njengoko intengiso indixelele kwaye ucime konke onako kwaye usombulule ingxaki yakho
Enkosi! Ndikhuphele usetyenziso olukhankanya i-AD (APNdroid) kwaye ndaguqula i-APN yenethiwekhi ye-3G kaTelcel, ndicinga ukuba ayisayi kuphinda idibane ... Hayi indlela ekupholile ngayo ukufumana iiforamu ngeSpanish kwezinye iingcambu zeCliq! Kudos 😛
Isixhobo X sitsho
IQonga eliMangalisayo !!! Ndivela eMexico kwaye ndisebenzisa i-TELCEL, ndiyisusele i-Dext yam ngaphandle kwengxaki enkulu !! Ndiyabulela kakhulu kubo bonke ubulumko bakho kulo mbandela ukuba ndinokukunceda nakuphi na ukonwaba.
Molo, ndinayo i-dext ukusukela izolo, eSpain nge-movistar, i-icon ye-3G ayiveli, kwaye andifumani kumamenyu wokwenza i-3G isebenze, ndinesivumelwano, kodwa kufuneka ndibengumqolo wembongolo, yiza kwi!
Ndikwanayo iDext / Movistar Spain (+ ingcambu). Xa ndiyithengile (ubhaliso lwesivumelwano esitsha, kunye nedatha yelizwi + (inyanzelekileyo), andinakho ukufikelela kwidatha kwangoko. Kuya kufuneka yenziwe ukuba isebenze emva kwexesha elincinci. Ukuba ndikhumbula ngokuchanekileyo, ndingakwazi ukunxibelelana nge-3G kuye kwafuneka ndigoduke ndiye kudibanisa nge-wifi ukuze ndikwazi ukubhalisa kwi-MOtoblur kwaye ke ndingene kwi-Dext. Ibingenayo i-icon ye-3G okanye imigca yokugubungela ngelizwi, emva kwemini / ngobusuku. Emva koko kwenzeka kum ukucima ifowuni kwaye uyiqale kwakhona kwaye yadibanisa kakuhle (ilizwi kunye nedatha).
Ndiyathemba ukuba iyanceda. Ukuba akunjalo, tsalela umnxeba iMovistar CAC.
Enkosi. Kulungile, bendicinga ukuba yinto ethile leyo, ukulinda ithutyana, kuba ukufikelela kwe-APN kulungiselelwe kakuhle, ndiza kuqala amaxesha ngamaxesha kude kube sebusuku ukubona ukuba sele ndinayo na. Ndibe nokunye ukuthandabuza:
Umxholo wokwenza imodem efana nale, umntu uyayinxiba, kwenzeka ntoni kumovistar ukuba ivela kumdlalo wokuhlekisa.
Incwadi yeedilesi ukuyigqithisa apha kwi-iphone, ndangqamanisa nembonakalo kwaye emva koko yintoni? kukho into yokukhuphela ukuhanjiswa kokuvumelanisa njengepda oq? Inokwenziwa kwifayile ethunyelwe ngeposi kwaye kunjalo, akunjalo? Okwangoku umqulu ongaka.
Ukufaka iiapps, kufuneka unengcambu? Ndicinga ukuba kuphela ezo zingasimahla, kunjalo.
Umbuliso kunye nemibulelo kwangaphambili.
Kwi-Dext kuza iMotoblur, engqamanisa abafowunelwa bakho beGmail / Facebook, ... kunye nefowuni (ngaphezulu okanye ngaphantsi kakuhle).
Ukuvumelanisa ne-Outlook, andicingi ukuba inokuba yinto emiselweyo (andenzi njalo). Kukho iTitDown yeNitroDesk ndicinga (usetyenziso oluhlawulelweyo, ~ $ 30 ndicinga) ukuvumelanisa iposi noTshintshiselwano, kodwa andazi ukuba iyangqinelana na nabo. Okwangoku andiyisebenzisi kuba kwinkampani yam ayenzelwanga wonke umntu.
Ingcambu ayinanto yakwenza nokuba ungafaka izicelo ezihlawulelweyo okanye hayi. Ngaphandle kwengcambu, ungafaka usetyenziso lwasimahla okanye oluhlawulelweyo (ukuzihlawulela ndicinga ukuba, andizamanga). Ngengcambu efanayo, kodwa ungasebenzisa usetyenziso olufuna imvume yengcambu (imiba ye-vpn, imowudi yefowuni, yogcino / imowudi yeefayile zenkqubo, ...).
Umxholo wokuSethering, okanye "imodem" njengoko usitsho, unokwenziwa nge-USB okanye nge-wifi (ndicinga ukuba ukuza kuthi ga ngoku inokwenziwa ngokutshintsha kwi-DevTeam ROM v1.0 abayikhuphileyo kwiveki ephelileyo, beyisebenzisa njengefowuni iindaba ezimnandi!). Ukwenza nge-USB kukho isicelo (awufuni nokuba yingcambu) yabona http://bit.ly/dtMe4T.
Andazi ukuba iTelefonica iyayivumela okanye ayiyivumeli, kwaye / okanye iya kwenza ntoni ukuba iyayifumana. Ngaba ukhona umntu onolwazi (oqinisekisiweyo okanye obhekisa kwikhontrakthi) onegalelo kwinto leyo?
Wamkelekile kwihlabathi elimangalisayo le-Android kwaye ngakumbi nge-Dext :-). Ndithumele amakhonkco aliqela, endicinga ukuba anomdla kwiwebhusayithi yam.
Yintoni onayo wonke umntu, olle ad umbuzo, uyazi ukuba ungayifaka njani i-sd yehagu apho ndayibona khona, andiqondi nto kwaye nokukhuphela ubuntu ukuguqula nje i-sd njengoko ingahambi lol ayenziwa ngenxa yobuvila kodwa ndiza kuthatha ixesha elide ngakumbi ekukhupheleni ubunto kunokutshintsha i-sd ayizukubakho enye indlela yokubulisa kwaye ukwamkelwa okutsha kwimotor dext root akuyi kuzisola nge-dext yabo nokuba shiya enye phakathi «» ngcono
Ndilindele impendulo yakho, imibuliso yam elungileyo yentengiso
@rikimm: akukho nto yokufaka Ubuntu, njengoko usitsho kuthatha ixesha elide kwaye andicingi ukuba izokukunceda kakhulu!
Faka Umphathi Wefayile ye-Astro (ASTRO http://market.android.com/search?q=pname:com.metago.astro). Le App yinduku, ikuvumela ukuba uzulazule kwi-SD, kwaye ngokomzekelo fakela iapk onayo kwi-SD.
Kananjalo (kucetyiswa kakhulu) kukuvumela ukuba wenze ukhuphelo lweeapps ozifakileyo kwifowuni kulawulo kwi-SD. (emva koko inokuphinda ibuyiselwe): Iluncedo olukhulu ukuba utshintsha iROM kwaye kuya kufuneka ufake iiapps ezikhutshelweyo.
Ngaphandle koko, ayinamandla kangako, «Usetyenziso lweeNkqubo», ikuvumela kuphela ukuba ufake iiapps kwi-SD.
Ndiyathemba ukuba kufanelekile!
Intengiso ndicinga ukuba uhambe kwelinye icala hehehe into endiyifunayo yi-app efakwe kwiselfowuni ndiyifaka kwi-sd ukuze ingangeni kwimemori yeselfowuni kuba ayichazi ubunto obuthi leyo Kuya kufuneka ndihlule i-sd ukuze izicelo ndizifakele kwi-sd kwaye ndizenze ukusuka apho hayi kwimemori yeselfowuni.
Ewe, emva kweeyure ezingama-40 andikabinayo i-3G, ndiye ndayiqala kwakhona amatyeli amaninzi kwaye akukho nto konke konke, le nto sele indicaphukisile, xa ndifika ekhaya ngentsimbi yesi-15 emva kwemini ndiza kubiza iMovistar CAC, uyazi inombolo ye-CAC, Kusimahla, ndihlawula umvuzo ngokusilela kwabo. Enkosi.
haha ewe ngokwenene.
Into oyithethayo andikabikho mfuneko yokwenza okwangoku. Ngokumalunga nokwahlulahlula i-SD ukwenza i-ext2 kunye nokwahlulahlula i-fat32, kubonakala ngathi kukho iindlela ezininzi. Inye kukuyenza kwiLinux (ungasebenzisa Ubuntu, kodwa awudingi ukuyifaka, vele ulahle i-liveCD.)
Inokwenziwa nakwigobolondo ye-adb ye-rom yokubuyisela, njenge-Amon_RA yokubuyisela umfanekiso.
Khangela kwi http://androidandme.com/2009/08/news/how-to-manually-partition-your-sd-card-for-android-apps2sd/.
Ke ndicinga ukuba kuya kufuneka ufake usetyenziso lweappss.
Ukuba uyakwenza oko, sixelele 😉!
Into endiyoyikayo, nditsalele umnxeba kwaye balibale ukuyenza isebenze ivenkile, kuya kufuneka uzikrune, kuba intombazana ibintle kakhulu, ukuba akunjalo! Yonke into isonjululwe, bandixelele ukuba kwi-10 min ndiza kuba nayo kwaye sele kunjalo, ngaphandle kokuqalisa kwakhona i-terminal ukuba uyafuna. Ukubulisa kunye nombulelo. Ndiza kuqhubeka apha kwiimowudi ze-dext.
ok intengiso kodwa kunye nokuba usetyenziso sele lufakiwe kwi-sd ukuze ingangeni kwimemori yeseli yam kuba inkumbulo yeseli incinci kakhulu kwaye xa iqala ukugcwalisa njengoko iseli lihamba kancinci kancinci kwaye ngokwahlukeneyo ndicinga ukuba kulunge ngakumbi kwaye kufakwe kwimemori ye-sd kuphela ukuze ndiqiniseke ukuba ndingazicimi iifolda zeenkqubo ezifakiweyo, ziyinyani
Kulabo sele benengcambu kwi-Dext yabo, ndicebisa ukuba ndihlaziye i-ROM esekwe kwi-1.1.31 (ene-Battery Manager, engekho kwi-ROM 1.1.7 emiselweyo ye-Movistar).
Ndikwacebisa ukufaka usetyenziso lwe-setCPU (simahla ukuba ubhalisa nge http://bit.ly/bhUvdR apho umphuhlisi ayipapasha khona): ikuvumela ukuba uchaze iinkangeleko ngokobungakanani bebhetri, ibhetri yetempile, ... kwaye uchaze ii-CPU ezenzeka ngeprofayile ukugcina ibhetri; umzekelo: ukuba kwi-stanby, thintela i-CPU ukuya kwi-245MHz (endaweni ye-528MHz ngokungagqibekanga).
AD, ndingayifumana phi iROM oyikhankanyileyo?
"I-ROM isekwe kwi-1.1.31 (ephethe i-Battery Manager, engekho kwi-ROM 1.1.7 emiselweyo yeMovistar umzekelo"
Okwangoku ndineROM yeTheDudes 0.4.1 ekuyo http://modmymoto.com/forums/showthread.php?p=3882310
Ngoku ndinomlingo weHTC.
Amanqaku kunye ne- € 49 bandinike i-LG GW620, efanayo kakhulu nale, kodwa batshintshela kwi-Movistar, bandinika yona nge-0 euros, ke ndiyifumene le, ngaphandle kwale ndiyifundileyo, kungcono isivumelwano / iindlela zosasazo lwentlalo.
Ndakhangela i-Android enebhodibhodi kwaye inexabiso elifanelekileyo, ke ndicinga ukuba ndingonwaba.
Andikabi nayo, kodwa ndifumana konke.
KwiMagic ndifake iROM esekwe kwi-Eclair.Into elungileyo malunga neHTC yindawo enkulu yabasebenzisi ekhoyo, kunye nenani labapheki abakhoyo.
Ngaba ucebisa nayiphi na iforum, ngaphandle kwale modmymoto?
Yintoni le isihogo i-htc kunye ne-lg yakho ekufuneka ibonile ukuba awunayo i-motorola dext le post yayiyeye-motorola dext okanye ucofe kulungile kwaye i-htc yi-wey htcmania uyibeke ngoluhlobo kuGoogle kwaye yiyo
Molweni nonke apha ndikuphazamisayo andazi nokuba kuye kwenzeka ntoni kwabo bane-akhawunti ye-hotmail njengoko ndinengxaki yokungathumeli i-imeyile ukuba ndiyayifumana nayo yonke into kodwa ukuyithumela enye ayindithumeli mpazamo kwaye andazi ukuba ndenze njani okanye loluphi ucwangciso lokusebenzisa umntu owaziyo malunga noku ndibulisa wonke umntu
Wena, gritty shitty.Funda ukufunda.Ukuba ndicacisa ukuba ndinamava nge-Android OS, kwaye ngaphandle koMlingo, ndikwanayo ne-DEXT esandula ukuthengwa.
Relax guys, ayinagalelo kwinto yokuxakanxana ...
Ngolwazi, ndibane iROM Handler 1.3 (jonga, unomathotholo omtsha!), Konke kulungile, ngaphandle kwengxaki ekhoyo ukusukela izolo phakathi kukaFacebook neMotoblur (ngakumbi kwi https://supportforums.motorola.com/message/117902#117902)
Ndiyayilandela AD, xa ndiyifunda ngale ntsasa, ndibanjwe kumzuzu ombi, ayizonjongo zam ukwenza imvakalelo embi.Ndicela uxolo ukuba kukho umntu owoniweyo.
Ndithengile i-motorola dext, kodwa andiyifumani unomathotholo kwaye bendijonga into ebhalileyo malunga nengcambu okanye ingcambu ukuze bakwazi ukumamela unomathotholo, ukuba umntu unokuyichaza, enkosi kwangaphambili
Ewe, ngokokwazi kwam, awungekhe ubeke unomathotholo ukuba ibandakanyiwe, ewe, kodwa bayayilungisa inkqubo ukuze umamele unomathotholo kangangoko ndinako. yenze kwaye uyenze kwaye ukuba ndiyaphumelela, ndiza kuchaza ukuba yenziwe njani
@ marco: into esiyixoxe ngentla malunga nerediyo entsha ayibhekiseli kwinto yokuba ungamamela unomathotholo kunye ne-Dext (ngokwethiyori inokuba njalo, kuba i-chip ye-Bluetooth ene-Dext ukuba iyakwazi ukulungisa i-FM, yona uyenzile Uzamile u-Eugene othile, kodwa ndicinga ukuba akakwazanga ukufumana isandi, unokubona kuphela ukuba uyacula).
Into esithetha ngayo ngonomathotholo omtsha kukuba e-US Motorola ikhuphe uhlaziyo lukanomathotholo, oluyinxalenye yomnxeba onoxanduva lokunxibelelana nesiphelo sendlela nenethiwekhi yomqhubi (ilizwi / idatha).
ha, uxolo, AD kodwa umbuzo ungamamela unomathotholo we-fm kwi-motorola dext, ndikubuza kuba kwiphepha le-idg.es lithi linonomathotholo kodwa alichazi ukuba liphi ukuba ungandinceda bona ukuba iphi, uxolele ukungazi ngenxa yokuba usuka kwi-nokia navigetor uye kwenye yezi terminals ukuba kukho umahluko
@marco: ngokokwazi kwam, ayinakwenziwa okwangoku. Akukho sicelo esivumela ukuba umamele unomathotholo kwi-Dext.
enkosi AD, ke umqulu wonke wokuhluma uqhubeke ukuze ube nokugubungela kunye nesantya sonxibelelwano ukuba kunjalo, umntu andixelele ukuba ndenze njani kodwa kubuKrestu ukuba unako; Andazi ukuba ungazibona iividiyo ze-youtube, kuba andiziboni okanye ukuba kukho umntu owaziyo indlela yokwenza, enkosi.
@marco: landela indlela ye-TheDudes kwi-M3 (ModMyMoto) kwiingcambu. Ukuba useSpain ungafaka i-rom ye-TheDudes 0.4.1 US (hayi i-Orange FR, kuba ine-azerty keyboard).
Funda imiyalelo yeforum kakuhle, kwaye ukuba uza kufaka enye iROM kamva, funda ngocoselelo imiyalelo yomfo oyenzileyo kunye nengxelo evela ebantwini. Ukuba kukho amaphepha angama-50 okuphawula, thatha ixesha lakho uwafunde kwaye ukuba unemibuzo ubuze apho.
Ukufunda kakuhle, kungaphezulu kwesiseko okokoko kuhlaziywa kweMotoblur 1.3.18 kubandakanya unomathotholo omtsha. Ukuba ufakela unomathotholo omtsha awungekhe uphinde ukhanyise i-SHX kuhlobo lwangaphambili (1.1.4 okanye 1.1.31). UKUBA WENZA njalo, uyayihlawula ifowuni yakho kwaye ugcina isitena (briq). I-AU ayisifumananga isisombululo koku.
Ingcebiso yam, okwangoku lumka kwaye unamathele kwirediyo yangoku kwaye uzinciphise kwiiROM: TheDudes 0.4.1 US, Handler 1.2 (not 1.3), okanye kb7sqi 1.0.5 (not 1.3.18)
kakuhle ekugqibeleni ndiza kuzikhuthaza ukuba ndincothule i-dext, imibuzo yam yile:
Ezo roms, loluphi uguqulelo lwe-Android abaziphetheyo?
Usifumana nini isifundo kwi-AD yaseSpain? xDDDD
Amahlaya ecaleni andiboni kungqondo ingcambu ukuba iirom zivela kwi-Android 1.5 ...
Ukuze ukwazi ukuthumela ii-imeyile kwiseli yakho (i-smtp port) kufuneka ubuze iTelmex (ndicinga ukuba usebenzisa i-infinitum) okanye umboneleli wakho we-intanethi ukuvulela izibuko lama-25 ukuze ukwazi ukuthumela, iTelmex iyithintela ngenxa yogaxekile ...
Ndingathanda ukuyisusa i-Dext yam kodwa kuqala ndingathanda ukwazi ukuba zeziphi izibonelelo ozibonileyo ngokuziguqula. Kwelinye icala, ngaba ukhona umntu owaziyo ukusebenzisa uphendlo lukaGoogle endaweni yokukhangela i-yahoo eza ne-Dext emiselweyo eMexico?
@Serch Into onokuyenza kukufaka i-T-Mobile yase-US TheDudes 0.4.1 Rom, ngokungagqibekanga iya kuza kuwe ngophendlo lukaGoogle :-).
Ekugqibeleni ndinexesha lokugqibezela inqaku lam malunga ne-Motorola Dext:
Ingcambu kunye nokucoca nge-Motorola Dext: http://bit.ly/aM1zq3
Ndiyathemba ukuba inomdla kwaye iyakunceda. Phinda ubhale kwakhona. Ukuba ubeke iikhomenti kwibhlog efanayo.
ndinombuzo kuwe, kwenzeka ntoni kukuba ndenze i-motorola yam ukuba iye kumzi-mveliso kwaye ayisandivumeli ukuba ndixhume kwi-motoblur kwaye ayindivumeli ukuba ndisebenzise i-nand buyisela, indithumelela impazamo ethi run'nandroid -mobile.shrestore'via adb Ndiyibuyisela njani nge-adb?
rikimm: nceda, faka uluvo kwibhlog yam, ndiza kukuphendula apho kuba kule blog ndihlala ndifumana iimpazamo xa ndibeka izimvo! (ukubona ukuba oku kupapashiwe)
Ndidinga isikhokelo okanye isikhokelo somsebenzisi ngeSpanish kwimoto yam ye-motorola cliq, ukuba abanye bayifumana kwi-Intanethi nceda undithumelele umyalezo onekhonkco ukuze ndiyikhuphele. Ndibhalele 20084615@itla.edu.do
Molo… ndimtsha kwiforum kodwa bendifunda kwaye ndifumana ulwazi malunga nokuhluthwa kweentsuku ezininzi, ndivela eArgentina kwaye ndineDecxt ecacileyo, xa ndifuna ukulayisha i-boot + ukubuyiselwa kweedudes, i-rsd indiphosela impazamo «Ayiphumelelanga kwinkqubo yokudanyaza» ... Andiqondi ukuba kutheni, kuqala ndicinga ukuba yipc, nditshintshele kwenye ipc, ndihlala ndilandela amanyathelo kunye nabo bonke abaqhubi abafakiweyo, ndizamile ukubeka iseli kwimowudi yokulungisa idatha kunye nokwenza ukuba olo khetho lungasebenzi .... Ngoku ndicinga ukuba ingangukubuyiselwa okungahambelani nohlobo lwam lweselfowuni, kodwa andifumani enye kwaye andifuni ukuba nditshintshe ingxelo kanomathotholo kuba bendizakuphelelwa yi-3g…. into endiyenzayo?!!!!
i-adlx (AD) sitsho
Ngokwazi kwam, kwi-Motorola Dext yaseArgentina neVenezuela, esele iza nonomathotholo ohlaziyiweyo (1.3 okanye * 5025 *), ndicinga ukuba akukho ndlela yakuzisusa ngaphandle kokuhlaziya unomathotholo iT-Mobile, ethi Ungaphulukana ne-3G :-(.
Indlela yeDude nge-SHX ayisebenzi kwirediyo ye-1.3 ...
Indlela ye-Orange FR rom iyakutshintsha irediyo yakho, ngaphandle kokubuyisela eyakho.
Phendula kwi-adlx (AD)
Molo, ndiyisusa njani i-dext? Ivela eTelcel (eMexico) ngaba umntu angandinceda? Ndifuna ukuyithengisa kwaye ndiyishiye njengefektri. Enkosi.